Nei Wholesale Order Kubva Kwatiri? - MOLONG TATTOO KUSVIRA CO., LTD
Iyo Yakanakisa Wholesale Stock
Yakanakisa Wholesale Stock Sekambani inotungamira pasi rose, tinopa zvinodarika zviuru zana zvemhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvemazita ezvakakurumbira, zvese nemitengo yezvakawanda. Unowana ruzivo rwehunyanzvi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakagadzirwa muChina nhasi.
Tumira kubvunza, kutengesa kwedu kunozokubata iwe nekukurumidza uye kukupa iwe nemoyo murefu uye neushamwari basa. Isu tinobvuma yakachengeteka mubhadharo sarudzo PayPal. Isu tinobvumawo Kubhadharwa kweBhangi uye Western Union kubhadhara. Tanga nhasi!
Isu tinoshandisa DHL, FEDEX, UPS uye EMS kutumira edu mapakeji madiki. Kubva paMOLONG TATTOO SUPPLY imba yekuchengetera kuenda kunzvimbo huru kuNorth America, Europe, Asia neAustralia, kutumira kunongotora mazuva matatu kusvika manomwe ekushanda. Nemhepo uye neGungwa zviripo zvakare!
Chengetedzo ndiyo inonyanya kukoshesa paMOLONG TATTOO SUPPLY. Isu tinovimbisa kuchengetedzeka kwese data rekutengesa. Tinoedza zvese zvatinogona kuti zvinhu zvako zviunzwe zvakachengeteka munguva. Isu tinoita ruzivo rwako rwekutenga rwakavanzika. Chengetedza zvakachengeteka kubva kwatiri!